CL – Group A: Kooxda Arsenal oo ku soo baxday kaalinta koowaad ee guruubkeeda kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Basel, xilli PSG ay barbaro la gashay Ludogorets… + SAWIRRO – Gool FM
CL – Group A: Kooxda Arsenal oo ku soo baxday kaalinta koowaad ee guruubkeeda kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Basel, xilli PSG ay barbaro la gashay Ludogorets… + SAWIRRO
Haaruun December 6, 2016
(Yurub)n 07 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 4-1 kaga adkaatay Basel, iyadoo kulankan uu Gunners saddexleey u dhaliyey Lucas Perez, waxaana dhinaca kale ay PSG oo ay ku tartamayeen kaalinta koowaad ay barbaro 2-2 la gashay Ludogorets.
Kooxda Arsenal ayaa goolasha la horreysay waxaana goolka hore uu ahaa kubbad uu soo dhigay Kieran Gibbs oo uu shabaqa oo furan si tartiib ah ugu dhammaystiray 8’daqiiqo Lucas Perez.
Markale 16’daqiiqo waxaa Arsenal goolka labaad u dhaliyey Lucas Perez, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu goolhayaha Basel ka tufay Kieran Gibbs, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-0 oo Gunners ku hoggaaminaysay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Arsenal ayaa la timid goolka saddexaad, waxaana 47’daqiiqo Hat-trick u dhaliyey Gunners Lucas Perez oo kulankan aad ugu dhaarsanaa inuu goolal badan dhaliyo, waxaana goolkaas uu ka yimid Alexis Sanchez, kulanka ayaana sidaasi ku noqday 3-0 ay iska lahayd Arsenal.
Goolkii afaraad ee kulankan ayay la timid Arsenal, waxaana kubbad uu 54’daqiiqo dibadda soo dhigay Mesut Ozil dhaliyey Alex Iwobi, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 4-0 ay ku gacan sarreysay Gunners.
Kooxda Basel ayaa hal gool iska soo celisay waxaana 78’daqiiqo u dhaliyey Seydou Doumbia kubbad uu isagu soo shaqeystay, kulanka ayaana sidaas ugu soo dhammaaday 4-1 ay guul ku gaartay kooxda Arsenal.
Dhinaca kale Paris Saint Germain ayaa la ciyaartay Ludogorets Razgrad, waxaana ay u baahnayd inay guul gaarto si ay ugu soo baxdo kaalinta koowaad ee guruubkan, iyadoo gool madax ah uu ugu shubay PSG 15’daqiiqo qeybtii hore Virgil Misidjan, sidaas ayaana lagu kala nastay Ludogorets oo kulanka ku hoggaaminaysay 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay 61’daqiiqo Edinson Cavani ayaa goolka barbaraha u dhaliyey, laakiin Ludogorets ayaa 69’daqiiqo markale goolka labaad ugu shubtay PSG, waxaana ka dhaliyey Wanderson.
Laakiin dhammaadkii ciyaarta Paris Saint Germain ayaa la timid goolka barbaraha, waxaana guuldarro ka badbaadiyey Angel Di Maria, kulanka ayaana ku soo dhammaaday gar isku mid ah 2-2, iyadoo PSG ay ku soo baxday kaalinta labaad ee guruubkeeda.
GOOGOOSKA: FC Barcelona vs Borussia Monchengladbach 4-0 (Turan oo Borussia ku taagsaday)
CL- Group C: Kooxda Barcelona oo xaaqday Borussia Moenchengladbach, iyadoo uu saddexleey u saxiixay Arda Turan, xilli Man City ay barbaro la gashay Celtic… + SAWIRRO